Ushintsho eMikhosini yaseNdlunkulu | IOL Isolezwe
Ushintsho eMikhosini yaseNdlunkulu
Isolezwe / 3 September 2012, 3:36pm /
INGONYAMA yesizwe samaZulu iNkosi Goodwill Zwelithini KaBhekuzulu isinqume ukuzibambela mathupha izinhlelo zayo yonke imikhosi yaseNdlunkulu esikhundleni sikahulumeni wesifundazwe.
INgonyama imemezele ukuthi yonke imikhosi yayo isizohlelwa yiKing Zwelithini Foundation kusukela ngonyaka ozayo njengoba sekuzobe kulungiselelwa ukuhlanganisa iminyaka engu-30 yavuselela lo mkhosi ngo-1984.
ISilo sithe ngoNovemba nonyaka sizoba nomhlangano lapho sizobumba khona ikomiti okuyilona elizodidiyela yonke imikhosi yasebukhosini bukaZulu.
UBayede uthe uhulumeni wesifundazwe uzoba yingxenye naye njengabanye abazoba sekomitini kodwa konke sekuzokwenganyelwa yithimba lakhe. Umemezele lezi zinguquko esigodlweni sakhe eNyokeni, KwaNongoma uBayede ngesikhathi ephakela izintombi zomhlanga nezethameli umyalezo wakhe wanonyaka kulo mkhosi obuhanjelwe yizintombi ezihambise umhlanga kuye kusukela ngo-9 ekuseni kwaze kwashaya ihora lesibili emini. Imikhosi emikhulu yaseNdlunkulu ebididiyelwa wuhulumeni yiwona owoMhlanga osewasatshalaliselwa naseNgwavuma, owoSelwa oba sekuqaleni kukaDisemba osanda kwethiwa kabusha usuka ekubeni owoKweshwama, oweLembe oba KwaDukuza ngoSepthemba, neminye.
Bese kunesikhathi nohulumeni uhlongoza izinguquko odabeni lokusingathwa kwezindaba zeNdlunkulu kusukela ekuqedweni koMnyango iRoyal Household kusungulwe iRoyal Household Trust eseyakhiwe vele ukuze ikwazi ukusingatha ezaseNdlunkulu ngokuzimela. UBayede uphinde wamemezela ukuthi kusukela ngonyaka ozayo uMkhosi woMhlanga usuzogujwa isonto lonke nokuzokwaziwa ngoMhlanga Week.
“Ngizophinde ngethule i-website esemthethweni yobukhosi iNgonyama.org okuyiyona ezoba nolwazi olusemthethweni lwezindaba zaseNdlunkulu ukuze ningahambi nisebenzisa noma yiluphi ulwazi eniluthola emithonjeni ewumbhedo,” kusho uBayede. Uphinde wathi lezi zinguquko uzenzela ukunqanda ubungozi bokushabalala kwalo mkhosi ngenxa yokuchuma kwawo.
“Njengoba lo mkhosi ususezingeni lomhlaba kunabantu abasixhaphazayo abawusebenzisa ukuze kunothe bona. Laba bantu bazenza abantu abasithandayo nabathanda isiko lethu kanti benza imali ngathi. Basithwebula izithombe kube sengathi bayasithanda kanti bayasixhaphaza ngoba uma sebefika emakubo benza imali ngento yethu bangasiniki ngisho nesenti lodwa leli,” kusho Isilo. Sithe iningi labo lingena ngawo amaZulu, lingene ngohulumeni elinye lingene njengezivakashi kuleli.
“Iningi labo licashe khona la embonini yezokuvakasha ngoba bangena ngaleyo ntuba. Abanye basebenzisa isiqubulo esithi siyanemukela embusweni wakwaZulu,” kusho iNgonyama.
Ubekusho lokhu uBayede kukhona eceleni kwakhe uNgqongqoshe wesifundazwe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha uMnuz Mike Mabuyakhulu, nowezobuCiko namaSiko uNkk Ntombikayise Sibhidla-Saphetha, obephethe uhlelo.